Markab Xoolo fara badan sida oo ku gubtay Nawaaxiga Dekedda Boosaaso – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Markab Xoolo fara badan sida oo ku gubtay Nawaaxiga Dekedda Boosaaso * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Markab Xoolo fara badan sida oo ku gubtay Nawaaxiga Dekedda Boosaaso
By MAREEG on 14th June 2015
Boosaaso ( Mareeg.com)-Wararka aan ka heleyno Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa ku soo warramaya in Markab siday xoolo fara badan ay maanta ku gubatay meel aan ka fogeyn xeybta Boosaaso oo ay ka shiraacatay.
Markabka Gubatay ayaa waxa ay ku sii jeeday dalka Isutagga Imaaraatka Carabta waxaana kadib dabka ka kacay la xaqiijiyay in ay ku basbeeleen Xoolo dhan 510 neef oo Lo ah iyo sidoon kale 660 Ari, waxaana wadarta guud ay isku tagaysaa 1,170 (Kun Boqol Iyo Todobaatan) Neef.
Saraakiil ka tirsan ilaalada Xeebaha Puntland oo u warramay Warbaahinta ayaa xusay in illaa 11 qof ay badbaadiyeen oo shaqaalihii markabka gubtay ka tirsanaa.
Dabka ayaa la xaqiijiyay in uu ka dhashay coos loo saaray xoolaha Markabka saarnaa oo dab ka bilowday uu gaaray matoorka Hoose ee Markabka.